İlka xanaf oo xilka laga qaaday – SOOMAALPEDİA
İlka xanaf oo xilka laga qaaday
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Somalia Xassan Sheekh Maxamuud, ayaa goordhow ku dhawaaqay in xil ka qaadis uu ku sameeyay Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Abuukaate Caydiid C/llaahi Ilka-xanaf.
Digreeto kasoo baxday Xafiiska Madaxweyne Xassan Sheekh, ayaa waxaa xilkaasi looga qaaday Ceydiid Ilka-xanaf , waxaana sidoo kale lagu sheegay in xilkaasi loo magacaabay Dr. Ibraahim Iidle Suleymaan, oo ah Garyaqaankii Guud ee Somaliland.
Dr. Ibraahim Iidle Suleymaan, ayaa waxaa isla maanta loo dhaariyay Xilkaasi, iyadoo Ilka-xanaf lagu wargaliyay in ila maanta uu xilkaasi ku wareejiyo Guddoomiyaha cusub.
Madaxweyne Xassan ayaa xil ka qaadista Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Abuukaate Caydiid C/llaahi Ilka-xanaf u cuskaday iyadoo marka koowaad ay da’diisu ka wayn tahay 61 sano, islamarkaana uu jiro 85 sano.
Marka labaad waxa uu ku eedeeyay Musuq maasuq baahsan, is daba marin iyo cabasho badan oo dadka Somaliyeed ay ka keeneen kiisaskii uu xukunadoodu qaaday.
Ilka-xanaf ayaa waxaa horay u magacaabay Madaxweynihii hore ee dowladdii KMG Sheekh Shariif.